अर्थ/वाणिज्य Archives - Recent Nepal News
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरि टेलिकमले ल्यायो अफर, कसरी लिने ?
काठमाडौं । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरि नेपाल टेलिकमले अफर सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल टेलिकमले आइतबारबाट जेठ चार गनेसम्म लागु हुने गरी टेलिकमले ९८ रुपैयाँ मूल्य पर्ने विभिन्न अफर ल्याएको हो । अफर अनुसार ९८ रुपैयाँमा तीन दिनसम्म जुनसुकै नेटवर्कमा २ सय मिनेट फोन गर्न सकिने भएको छ । ९८ रुपैयाँमै तीन सय वटा एसएमएस वा ६ जिबी डाटा प्रयोग गर्न सकिने समेत टेलिकमले उल्लेख गरेको छ । यो ...
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा ‘क्यूआर कोड’ प्रयोग (स्क्यान) गरी ट्राफिक जरिवाना तिर्न सकिने व्यवस्था शुरू भएको छ। काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र कुमारी बैंक लिमिटेडवीच सहकार्यबाट यो प्रविधि जडान गरी जरिवाना तिर्ने प्रक्रियालाई सहजीकरण गरेको हो। अर्थात ‘क्यू आर स्क्यान, पे फाईन एण्ड विथड्र डकुमेण्ट (QR Scan, Pay Fine & Withdraw Document)’सुविधाको थालनी भएको छ । उक्त सेवा प्रारम...
‘आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ नारामै, मकै, गहुँ, कोदोमा समेत विदेशको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था
काठमाडौं । नेपालको कुल कृषियोग्य भूमिमध्ये सात प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार देशभर कुल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक दुई हजार नेपाली नागरिक रोजगारीको खोजीमा विदेश उड्छन् । कृषिप्रधान मुलुकका रूपमा देश चित्रित छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशतबराबर रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक विभागको विव...
९ महिनामा २६ अर्बको तरकारी आयात
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा २६ अर्ब बढीको तरकारी जन्य उत्पादन आयात भएको छ । भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार (साउन-चैत) चैत मसान्त सम्ममा २६ अर्ब ७३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको ६२ करोड ४५ लाख ९९ हजार केजी तरकारी आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र ३८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको तरकारी आयात भएको थियो । ८६ करोड ६५ लाख केजी तरकारी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ...
सरकारी इन्धन खर्च २० प्रतिशतले कटौती, असारसम्म लागू हुने
काठमाडौं । सरकारबाट इन्धन सुविधा लिने मन्त्रीदेखि कर्मचारी सबैको सुविधामा २० प्रतिशत इन्धन कटौती भएको छ । सरकारले आर्थिक संकट टार्नका लागि भन्दै इन्धन उपभोगमा कटौतीको निर्णय गरेको हो । उक्त निर्याण सोमवारदेखि कार्यन्वयनमा आएको छ । ‘इन्धन शिर्षकमा विभिन्न मन्त्रालयरनिकाय तथा नेपाल सरकारसँग सम्वद्ध सार्वजनिक संघ संस्थाले बाँकी बजेटको २० प्रतिशतले कटौति गर्ने,’ अर्थ मन्त्रालयले सोमबार एक सूचना...
विदेशी विनिमय सञ्चिति ९ अर्ब ५८ करोड डलर मौज्दात, ६.७ महिनाको आयात धान्ने
काठमाडौं । विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को ८ महिनाको तथ्यांकको आधारमा प्रकाशित गरेको मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको प्रतिवेदनले यस्तो देखिएको हो । २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.३ प्रतिशतले कमी आई २०७८ फागुन मसान्तमा ११ खर्ब ७१ अर्ब कायम भएको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल ...
मेलम्चीको पानी सुरुङमा पठाइयो, दुई साताभित्र काठमाडौंका धारामा
काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले मेलम्चीको पानी काठमाडौंबासीलाई खुवाउने पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको सपना पुरा भएको बताएका छन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँधस्थल अम्बाथानमा रहेको १ नम्वर डाइभर्सन गेटबाट मेलम्चीको पानी पथान्तरण गरी ३८ नम्वरको गेट खोलेर सुन्दरीजलतर्फ पथान्तरण गर्दै यस्तो बताएका हुन्। गत असार १ गते र त्यसपछि मेलम्ची नदीमा आएको बाढीका कारण...
दुई कम्पनीले पाए आइपीओ जारी गर्न अनुमति, कुनले कति कित्ता ?
काठमाडौं । दुई जलविद्युत् कम्पनीले प्राथमिक साधारण सेयर (आइपीओ) निष्काशन गर्न अनुमति पाएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बिन्धाबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी र दोर्दी खोला जलविद्युत् कम्पनीलाई आइपीओ निष्काशन गर्न अनुमति दिएको हो। बोर्डबाट बिन्धाबासिनी हाइड्रोपावरले चैत २५ गते र दोर्दी खोलाले चैत २८ गते आइपीओ जारी गर्न अनुमति दिएको हो । बिन्धाबासिनी हाइड्रोपावरले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ दरल...
काठमाडौं । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका अधिकांश नेपाली विदेशमा अलपत्र पर्न थालेपछि सरकारले त्यस्तो बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले स्वघोषणा पत्र अनिवार्यरुपमा भर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा भिजिट भिसा र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर गएका व्यक्ति अलपत्र पर्ने, ठगिने, सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क तिर्न बाध्य पारिने जस्ता प्रवृत्ति देखिएपछि व...
सरकारले दिने इन्धन सुविधा २० प्रतिशत कटौती, रेमिट्यान्स बढाउन नयाँ नीति
काठमाडौं । सरकारबाट इन्धन सुविधा लिने मन्त्रीदेखि कर्मचारी सबैको सुविधामा २० प्रतिशत इन्धन कटौती हुने भएको छ । सरकारले आर्थिक संकट टार्नका लागि भन्दै इन्धन उपभोगमा कटौतीको निर्णय गरेको हो । पछिल्लो समय मुलुकमा आर्थिक संकट पदैृ गएपछि सरकारले यस्तो नीति अपनाएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको अनुसार सरकारले औपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्सको बचत र सटही दरमा पनि सुविधा दिने निर्णय गरे...